I-Eifel Retreat - amagumbi okulala amabini - I-Airbnb
I-Eifel Retreat - amagumbi okulala amabini
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguEgle & Leo
UEgle & Leo unezimvo eziyi-43 zezinye iindawo.
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-17 Dis.
IHOLIDE YAKHO EGQIBELELEYO
Indawo efanelekileyo yokuphumla, uzihlaziye uze ufumane uxolo lwangaphakathi,
ukubuyisela ingqondo, umzimba nomphefumlo wakho. Ungayidibanisa kunye nonyango lwethu lomoya kunye/okanye ukhenketho lwendalo.
Iintsuku eziyi-7 e Simmerath
Kanye embindini we-Eifel National Park kunye neekhilomitha eziyi-2,5 ukusuka kwi-Rursee Lake.
Iilali ezikufutshane iEinruhr kunye neRurberg zibekwe echibini kwaye zineevenkile zokutyela ezahlukahlukeneyo, ezivuleke kakhulu ngexesha lasehlotyeni. Phakathi kukaMatshi noNovemba usenokonwabela ukubukeka kwechibi kwizikhephe zeRursee. Isixeko esikufutshane esihle saseMonschau simema abakhenkethi ukuba batyelele iivenkile zaso ezincinci kunye nee-boutique baze bahambe kwiindawo zaso ezintle.
Isixeko saseSimmerath sikumgama weekhilomitha eziyi-13 kwaye sineevenkile ezinkulu, kunye neevenkile zokutyela ezahlukahlukeneyo, ezivulekileyo unyaka wonke. Apho ungafumana nesibhedlele.
Umbuki zindwendwe ngu- Egle & Leo
Ekubeni i-Egle isebenza ixesha elithile kwiofisi yabakhenkethi yasekuhlaleni sinokunika iindwendwe zethu inkcazelo esexesheni ngale ndawo. Ukongezelela, i-Egle inikezela ngeendawo zokuphumla ezingokomoya ezifana nemasaji ye-Ayurvedic, i-Reiki, i-Channeling kunye nokucamngca. Namhlanje kukho uhambo lwendalo lokubuka iintaka, iintaka nezilwanyana ezifihlakeleyo, iiseshini zokubethwa ngumoya kunye nokukhenketha ngebhabhathane.
Ekubeni i-Egle isebenza ixesha elithile kwiofisi yabakhenkethi yasekuhlaleni sinokunika iindwendwe zethu inkcazelo esexesheni ngale ndawo. Ukongezelela, i-Egle inikezela ngeendawo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Simmerath